मंगलबार, माघ ६, २०७७ ०१:२९:०६ युनिकोड
बिहिवार, श्रावण १५, २०७७ बालाराम उपाध्याय
(शन्तोसम् परमम् सुखम्)–बेद। संसारको सबै भन्दा आनन्द वा सुख भनेकै सन्तोष हो। ब्रह्माण्डमा भएका जति पनि जिवात्मा छन्, तिनलाई आफ्नो अधिनमा रखेर नपुगे पछी प्रकृतिलाई पनि आफू अनुकूल बनाउन तल्लीन मानिस दैनानुदिन स्वर्गीय आनन्दको खोजिमा भौतारि रहेको हुन्छ। सीमित साधन स्रोतले असीमित आवश्यकता पूरा हुदैनन् भन्ने थाहा पाउँदा पाँउदै पनि खहरे खोलाको भेल जस्तै व्यग्रतामा कुदिरहेको हुन्छ।
आफ्नो खुशीको निमित्त जस्तोसुकै कार्य गर्न तयार हुन्छ र गर्छ पनि। क्ति पय अवस्थामा क्षणिक आभ प्राप्त गर्छ, तर सन्तोष हुदैन, थप प्राप्तीको लागि लाग्छ, सुझ–बुझका साथ कार्य गर्दा कति पय वथामा केही चिज प्राप्ति हुन्छ, भने कति पय अवस्थामा प्राप्त गरेको चिज पनि गुम्ने खतरा रहन्छ। भन्छन् –भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्ठाको पोखिन्छ। मानिसको स्वभाव आफुले गरेको पेसा र व्यवसायमा सन्तोष भएर रमाउन नसक्ने अर्थात सबै थोक अर्काको नै राम्रो देख्ने, जसले गर्दा उ कहिले पनि खुशी हुन सक्दैन।
यस विषयमा एउटा कथा छ:–
एउटा काग रुखमा बसि रोइ रहेको रहेछ, एक जना तपस्वी त्यही रुखको छहारिमा बसे, कागको आँसु ती तपस्वीको शरीरमा खस्यो माथि हेरे काग रोइरहेको छ, तपस्वीले कागलाई सोधे काग भाई तिमी किन रोइरहेको? यस्तो स्वतन्त्र जिन्दगी भएर पनि? कागले जवाफ दियो, अरे! महाराज यो जिन्दगी पनि कोहि जिन्दगी हो र? न म रुपमा राम्रो छु, न बोलिमा कुनै मिठास छ। मैले करायो भने सबैले दिक्क मान्छन् र मलाई धपाउछन्। भगवानले मलाई किन यस्तो बनाएछन्! हे प्रभु मलाई हास बनाइ दिनु पर्यो। भनेर भने पछि ती तपस्वीले भनेछन्। हुन्छ म तिमिले भनेको काम गरिदिउला एक पटक हासलाई त भेटेर आउ। हुन्छ भन्दै काग हासलाई भट्न जान्छ।
हासलाई भेटेर कागले भन्छ, हास भाई तिम्रो क्या मजा दिन्दगी है? क्या श्वेत तिम्रो रुप, पानीमा तैरी रहेको देख्दा मानिसहरु सबै प्रफुल्ल हुन्छन्, तिम्रो फोटो खिचाएर लिन्छन् र घरमा सजाएर राख्छन्। तिमी त कति भाग्यमानी है? कागको कुरा सुनेर हासले जवाफ दिन्छ – काग दाई यो जिन्दगी पनि कोहि जिन्दगी हो? संसारमा कहाँ के छ? थाहा छैन। फोहोर पानीमा जिन्दगी बिताउनु परेको छ। सत्रुको भए उत्तिकै छ। स्वतन्त्र भएर डुल्नु छैन। कागले फेरि भन्छ त्यसो भए हासको जिन्दगी राम्रो छैन? हासले भन्छ छैन, कागले प्रति प्रश्न गर्छ, त्यसो हो भने तिम्रो बुझाईमा कसको जिन्दगी राम्रो लाग्छ? हासले भन्छ सुगा को। त्यसो भए सुगा बनौं।
दुबै जना (हास र काग) बाबा जी कहाँ जान्छन् र सुगा बनाई दिन प्रस्ताव राख्छन्। महाराज हामीलाई सुगा बनाई दिनु होस्। महाराज भन्छन् (हुन्छ म तिमीहरुलाई सुगा बनाई त दिउँला त्यो भन्दा पहिला सुगालाई भेटेर त आउ।
दुबै जना सुगा खोज्दै बन जङ्गल डुल्न थाले। बल्ल–बल्ल हरियो रुखमा सोही रङको सुगा भेट्टाए। अनि सुगालाई सोधे, सुगा भाई तिम्रो जिन्दगी क्या मजा है? कस्तो मजाको लोभ्याउने सुन्दर जिउ, कति मीठो बोली। स्वतन्त्र रुपमा संसार फिरि रहेका छौ। मानिसहरुले तिम्रो स्वर मन पराउछन् र घरमा लगेर पाल्छन्। यतिकैमा सुगाले भन्यो साथीहरु, यो सुगाको जिन्दगी पनि कुनै जिन्दगी हो र? तिमीहरुलाई अघि देखि म डुलिरहेको देक्थे। तर मलाई पाउन सक्नु भएन हरियो रुखमा बस्दा मेरो पहिचान हराउँछ, म कत–कता बिलोप हुन्छु। मेरो रुप र बोलिको कारण म जति असुरक्षित कोहि छैन। मानिसहरुले मलाई पक्रेर लैजान्छन् र पिजडामा राख्छन्। मेरो आफन्तसंग बिछोड हुन्छ। अरे! सुगाको जिन्दगी राम्रो छैन? हास र कागले भने, सुगाले भन्छ छैन। फेरि सोध्छन्, त्यसो हो भने जिन्दगी कसको राम्रो छ त? सुगाले भन्छ। मेरो विचारमा त मयुरको जिन्दगी सुन्दर र खुशी छ।
मयुर बन्ने लालसा बोकि बाबा जी कहाँ हाजिर भए र अनुरोध गरे। हे प्रभु जिन्दगी त मयुरको पो खुशी रहेछ, हामी तिनै जना (काग, हास र सुगा) लाई मयुर बनाई दिनु पर्यो। तपस्वी बाबा जीले भने हुन्छ तिमीहरुलाई म मयुर बनाई दिउँला, एक पटक मयुरलाई भेटेर त आउ।
सहमति जनाउदै तिनै जना मयुरलाई भेट्न गए। मयुरलाई भेटेर भने आहा! मयुर भाई तिम्रो जिन्दगी त क्या खुशी है? तिम्रो रुपको बयान गरेर साध्य नै छैन, जब तिमी प्वाँख फिजाएर नाच्न थाल्छौ, सब जना रमाउछन्। मानिसहरुको नाच हेर्नेको भिड लाग्छ, आकाशबाट बिना बादल पानी बर्सिन्छ। कति खुशी छौ होला है? मयुरले भन्छ, साथिहरु यो जिन्दगी पनि कुनै जिन्दगी हो र? जसको मृत्युको कुनै ग्यारेन्टी छैन, प्रत्येक दिनमा एउटा न एउटा आफन्त गुमाउनु परेको छ। मान्छेहरु पक्रन्छन्। मेरो एक–एक प्वाँख झिक्दै घरमा सजाउछन्। पुस्तकका पानामा सजाएर राख्छन्। यो पृथ्वीमा सबै भन्दा असुरक्षित कोहि छ, भने त्यो मयुर छ, त्यसैले यो सुन्दर रुपले मलाई दुखी बनाएको छ। तिनीहरुले अचम्म मान्दै भने त्यसो भए मयुरको जिन्दगी खुशी छैन? अँह छैन। मयुरले भन्यो, तिम्रो विचारमा को खुशी छ भनत? (काग, हास र सुगाको) प्रश्नको जवाफ दिदै मयुरले भने मेरो विचारमा सबै भन्दा खुशी काग छ। तिनै जनाले अचम्म मान्दै सोधे कसरी कागको जिन्दगी राम्रो छ? मयुरले भन्यो, काग जस्तो स्वतन्त्र अरु कोहि छ र? उ जता जाओस्, जे गरोस् कसैले वास्तै गर्दैनन्। हामी भन्दा धेरै सुरक्षित छ काग, त्यसैले मेरो विचारमा काग जति खुशी अरु कोहि छैन। मयुरको यस्तो जवाफले तिनै जना जिल्ल परे र लाज मानेर फर्किए।
हामी जुन सुकै पेशा व्यवसायमा लागे पनि आफ्नो पेशा र व्यसायमा खुशी छैनौँ। जब सम्म मानिस आफ्नो पेशा र व्यवसायमा खुशीका साथ रमाउन सक्दैन, उसले प्रगती गर्न सक्दैन। आफ्नोमा चुनौती र समस्या देख्ने र अर्को तिर अवसर र सम्भावना देख्ने हाम्रो प्रवृत्तिले गर्दा न हामी प्रगती गर्न सक्छौ, न खुशी हुन्छौं।
जुन पेशा र व्यवसायमा छौ, त्यहीँ राम्रो गरौं त्यसैमा भविष्य देख्ने गरौं, र जे प्राप्त हुन्छ, त्यसैलाई खुशिको साथ ग्रहण गरौं। सन्तोष नै सबै भन्दा ठूलो खुशी अरु के होला? जिवनमा खुशी जो रहन्छ, उसको आयु लामो हुन्छ रे! उसले प्रगती गर्न सक्छ रे!
त्यसैले यो मानिसको जीवन आफ्नो लागि मात्रै हैन पृथ्वीको सबै प्राणीको खुशिको लागि हो। आफू खुशी हुन अरुलाई खुशी पारौं। यो मानव धर्म मात्रै हैन कर्तव्य पनि हो।
लेखक उपाध्याय : पूर्व शिक्षक र हाल नेकपाका नेता हुनु हुन्छ।
प्रकाशित मिति: बिहिवार, श्रावण १५, २०७७, १०:४५:००